Maxaa ka jira inuu dagaal dhexmaray Ciidamada DFS iyo kuwa Kenya? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maxaa ka jira inuu dagaal dhexmaray Ciidamada DFS iyo kuwa Kenya?
By Radio Dalsan Reporter	 On Sep 26, 2020
Maamulka Gobolka Gedo ayaa ka hadlay dagaal saacado kahor ah la sheegay inuu ka dhacay xuduudka Soomaaliya iyo Kenya, kaasi oo dhexmaray Ciidanka dowladda Federaalka iyo kuwa Kenya.
Guddoomiyaha degmada Balad-xaawo ee Gobolka Gedo Axmed Barre Sheekh oo wareysi siiyay Idaacadda Dalsan ayaa waxaa uu u sheegay in wax dagaal ah uusan ka dhicin xuduudka labada dal gaar ahaan inta u dhexeeysa Balad-xaawo iyo Magaalada Mandheera.
Waxaa uu sheegay Guddoomiye Axmed Barre in uu ku sugan yahay Magaalada, isla markaana aysan waxb ka jirin wararka baraha Bulshada lagu faafiyay ee ahaa in saakay uu dagaal dhexmaray Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Kenya, kaasi oo la tilmaamay inuu ka dhashay Khasaaro kala duwan.
Isaga oo sii hadlaayay Guddoomiye Barre ayuu ku hanjabay in haddiin Ciidanka Kenya ay joojijn waayaan dhibaatooyinka ay ka wadaan Degmooyinka Gobolka Gedo ay tallaabo Cad ka qaadi doonaan Ciidanka dowladda Federaalka ee ku sugan Balad-xaawo, isagoo Carabka ku dhuftay in xaaladda haatan ay tahay mid degan.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha degmada Balad-xaawo ee Gobolka Gedo Axmed Barre Sheekh ayaa sheegay in shacabka Gobolka looga baahan yahay inay si nabad ah u dhigaan dibax-baxyadooda ay uga soo horjeedan tacadiyo Ciidanka Kenya ka geysteen Ceel-waaq.
Dhinaca Ilo madax banaan oo ku sugan degmada Balad-xaawo ee Gobolka Gedo ayaa soo sheegay in saakay ay maqleen dhawaqa rasaas xoogan, In kastoo aysan ceyn cida riday, waxaana xaaladda Magaalada ay tahay mid degan.
Madaxweyne Qoorqoor oo ku wajahan Magaalooyin ka tirsan Galmudug
Dad Careysan oo Banaanbaxyo ballaaran Maanta ka dhigay Gedo